Theo Walcott Oo Waqtigii Dhimashada Guul U Diiday Chelsea, Southampton Oo Ku Dhegtay Blues Xilli Timo Werner & Havertz Ay Isbareen Premier League – Laacibnet.net
Theo Walcott Oo Waqtigii Dhimashada Guul U Diiday Chelsea, Southampton Oo Ku Dhegtay Blues Xilli Timo Werner & Havertz Ay Isbareen Premier League
October 17, 2020 Balaleti
Gool uu dhaliyay Theo Walcott waqtigii dhimashada ciyaarta ayay Southampton ku barbareysay Chelsea oo marti loogu ahaa Stamford Bridge iyadoo lagu kala baxay barbaro 3-3 ah xilli daafacyada iyo goolhayaha Chelsea ay qasaariyeen howshii ay qabteen weerarkooda cusub.
Libaaxyada cusub ee Chelsea Timo Werner iyo Kai Havertz ayaa ugu danbeyn is keenay masraxa Premier League iyagoo dhaliyay seddexda gool ee Chelsea.
Timo Werner furtay goolashiisa Premier League isagoo labo gool oo qurux badan dhaliyay halka uu caawiye ka noqday goolkii ugu horeysay ee uu Kai Havertz ka dhaliyay horyaalka Ingariiska. Laakiin waxaa goolashooda hal bacaad lagu lisay ka dhigay daafacyada kooxda Chelsea iyo goolhaye Kepa kuwaasoo seddex gool oo ay difaacan kareen laga dhaliyay.
Chelsea ayaa ku jirta kaalinta lixaad ka dib shan kulan oo la ciyaaray iyagoo leh 8 dhibcood. Halka Southampton ay hal dhibic ka danbeyso iyagoo ku jira kaalinta 10aad.
Ciyaarta ayaa aheyd qeybtii hore mid hal dhinac kaliya u socota iyadoo Chelsea ay iska maamuleysay 45tii daqiiqadood ee ugu hoseysay, waxayna fursadoodii ugu horeysay heleen daqiiqadii seddexaad markii goolhayaha Southampton uu labo badbaadin oo isku xigta ka sameeyay Chilwell iyo Havertz.
Waxay ku qaadatay kaliya 15 daqiiqo inay Blues hogaanka u qabato ciyaarta markii Timo Werner uu dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee Premier League isagoo kubad ka helay Chilwell islamarkaana suuqa u diray Bednarek ka hor inta uusan ku qoob ciyaarin xerada goolka isagoo kubada ka dhex bixiyay dhowr ciyaaryahan islamarkaana shabaqa ku hubsaday.
Walwalkii laga qabay Timo Werner ee Premier League ayaa si fudud loo ilaaway markii uu dhaliyay goolkiisii labaad ee ciyaarta daqiiqadii 29aad, waxayna aheyd gool aad u qurux badan uu saxiixay xiddiga Jarmalka.
Kubad dheer ayaa waxa u soo qaaday Jorginho, wuxuu mar kale ka soo xarooday daafaca Bednarek ka hor inta uusan kubada ka dulqaadin goolhaye McCarthy oo uusan madax ku dhameystirin iyadoo shabaqa uu faaruq yahay.
Iyadoo la filayay inaysan Southampton soo gaari doonin shabaqa Chelsea ayay wax walba isbedeleen daqiqiadii 43aad markii uu Danny Ings ciyaarta ku soo celiyay kooxdiisa.
Havertz ayaa kubad laga qaatay iyadoo Adams uu kubada u dhex bixiyay Danny Ings kaasoo kubada la hareermaray goolhaye Kepa islamarkaana toogtay shabaqa faaruq ah. Waxaa qeybtii hore oo ay Chelsea gacan sareysay lagu kala nastay 2-1 oo ay Blues hogaanka ku heysay.
Wixii ay weerarka Chelsea libaaxyo ahaadaanba, waxaa ka danbeeya daafacyo bisado ah oo si fudud goolal looga dhaliyo, iyadoo Southampton ay heshay goolka barbaraha daqiiqadii 57aad.
Blues ayaa iska dhiibto hogaan labo gool ah markii baas xun uu Zouma u celiyay goolhaye Kepa kaasoo isna qaladkii Zouma qalad kale oo ka weyn dulsaaray markii uu lugta la waayay kubada, waxay keentay Ings oo xagal xun joogay kubada laga horjoogsado laakiin waxaa helay Adams oo shabaqa meel kore ka geliyay.
Balse Zouma iyo Kepa waxaa furtay saxiixa cusub kale ee Chelsea Kai Havertz oo hogaanka ku soo celiyay labo daqiiqo ka dib isagoo dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee Premier League.
Chelsea ayaa durbadiiba weerar rogaalcelis ah qaaday iyadoo Timo Werner uu boos banaan ku helay geeska midig ee xerada ganaaxa. Wuxuu arkay Havertz oo boos u sii qaatay isagoo kubada u dhigay saaxiibkiisii Bundesliga kaasoo isna shabaqa ku taabtay,.
Laakiin howshii Timo Werner iyo Havertz waxaa meesha ka saaray Theo Walcott oo markii labaad ku soo laabtay Southampton kaasoo goolka barbaraha dhaliyay daqiiqadii 2aad ee afar daqiiqo oo ciyaarta lagu daray, isagoo kubad laad xor ah oo ay Chelsea iska soo bixisay ku laabay islamarkaana dabamariyay goolhaye Kepa.
Ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay barbaro 3-3 ah iyadoo tababare Frank Lampard uu badiyay kaliya labo ka mid ah shantii kulan ee la ciyaaray horyaalka Premier League.